ချစ်သူတွေကြားမှာ ဝင်ရှုပ်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ - For her Myanmar
ဒီလို သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ကိုယ့်အချစ်ရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်နေရပြီလား
သူငယ်ချင်းဆိုတာတော့ အရာရာ ဆိုးတိုင်ပင်၊ ကောင်းတိုင်ပင်ပေ့ါ။ ကိုယ့်မိဘ၊ ကိုယ့်ချစ်သူတွေ မသိတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းတွေတောင် သူတို့က သိနေတတ်တယ်လေ။ အိမ် နဲ့ အဆင်မပြေရင် ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူ နဲ့ အဆင်မပြေရင်လည်း သူ့ကိုပဲ ရင်ဖွင့်ရတာမလား။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိတာတော့ အမှန်တရားပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ခင်ခင် ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းကောင်း သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်အချစ်ရေးကို ဘေးကနေ အကြံဉာဏ်ပေးဖို့ အားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့ကလွဲရင် စွက်ဖက်ခွင့်တော့ မရှိဘူးပေါ့နော်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အချစ်ရေးမှာ ဝင်စွက်တတ်တဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတာက ကိုယ့်ဘက်မှာရော၊ ကိုယ့်ချစ်သူဘက်မှာရော ရှိတတ်၊ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေလဲဆိုတော့ …
Related Article >>> ကိုယ့်ချစ်သူကို အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက မုန်းတီးနေရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
၁။ ကိုယ်တွေကြားကို အတင်းဝင်ပါတာ
တစ်ခါတလေ သူငယ်ချင်းဘေးမှာ ရှိတုန်း ချစ်သူနဲ့ (messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ်) စကားများနေပြီဆိုပါစို့။ သူငယ်ချင်းက ဘေးကနေ ဟိုလိုပြောလိုက်လေ၊ ဒီလိုပြောလိုက်လေ နဲ့ အတင်းဝင်ပါနေတာမျိုးကလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ချစ်သူ နဲ့ ကိုယ်ကြားမှာ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာက ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ ကြားထဲက သူငယ်ချင်းတွေ ဝင်ပါလိုက်လို့ သေးသေးလေးကနေ အကြီးကြီးဖြစ်သွားပါရောလား…
ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လောက်ခင်ခင် ကိုယ့်အချစ်ရေးကိုတော့ မစွက်ဖက်သင့်ဘူး
၂။ ကိုယ့်ချစ်သူ ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ဝေဖန်တာ
ကိုယ်က ချစ်လို့ ရွေးချယ်ထားပေမဲ့ ချစ်သူမှာလည်း အားနည်းချက်ဆိုတာရှိမှာပဲလေ။ ဒါကို သူငယ်ချင်းက အမြဲလိုလို အပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့အခါ စိတ်ရှုပ်ရတာပေါ့နော်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်ဖြစ်စေချင်တာတော့ လူတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်တကယ် ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ အဆင်အပြေဆုံးသူကို ရွေးချယ်ရတာ ပုံမှန်ပဲလေ…
ဒါကိုမှ သူငယ်ချင်းက နင့်ချစ်သူက ပိန်လိုက်တာ၊ ဝလိုက်တာ၊ ရှည်လိုက်တာ၊ ပုလိုက်တာ ဆိုတာမျိုး၊ နင့်ချစ်သူက အလုပ်မရှိဘူးတို့ ပိုက်ဆံကလည်း အမြဲပြတ်နေတာပဲတို့ ဒါမျိုးတွေ အဆတ်မပြတ် ဝေဖန်လာတဲ့အခါ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ သစ်ငုတ်တွေတောင် နှဲ့ပါများရင် နဲ့လာသေးတာပဲ မဟုတ်လား… ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ကလည်း စိတ်တွေ ယိုင်လာတဲ့အခါ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဘက်က ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သူငယ်ချင်းကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကိစ္စအကြီးကြီးလို့ ထင်မြင်လာပြီး ကိုယ့်ချစ်သူကို စိတ်ပျက်လာမိတာမျိုးပေါ့။
၃။ ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကြားက ဆက်ဆံရေးကို ဝေဖန်တာ
ချစ်သူတွေကြားမှာ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ – အပြင်သွားမယ်ဆိုရင် ချစ်သူကို အသိပေးပြီးမှ သွားတာမျိုး၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ပုံတွေတင်မယ်ဆိုရင် ချစ်သူ ခွင့်ပြုမှတင်တာမျိုး အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။ အပြင်လူတွေအတွက် သည်းတယ်၊ ကဲတယ် ထင်စရာရှိပေမဲ့ ချစ်သူတွေကြားမှာတော့ ကြည်နူးစရာပေါ့။
ဒါတွေကို အပေါင်းအသင်းတွေက ဝေဖန်လာတဲ့အခါ ချစ်သူတွေကြားက ကြည်နူးစရာလေး ပျက်စီးရတော့တာပါပဲ။ ဆိုပါစို့ ဘော်ဒါတွေ နဲ့ အပြင်သွားရာကနေ Club သွားဖို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ကိုယ်က ငါ့ချစ်သူကို ခွင့်တောင်းလိုက်ဦးမယ် လို့ပြောတဲ့အခါ “အမလေး အဖြစ်သည်းလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့ နင်က သူ့ကိုအခုတည်းက ကြောက်နေရပြီလား” ဆိုပြီး ဇွတ်အတင်းအသိပေးမခံဘဲ ထားတာမျိုးပေါ့။
ကိုယ့်ချစ်သူဘက်က ကြည့်တော့လည်း အရင်က ဒါမျိုးဆို သူ့ကို အသိပေးနေကျမှာ အခုလို မပြောမဆိုဘဲသွားတာ သိလိုက်ရရင် အံ့သြဒေါသထွက်မှာပဲ။ အဲဒီမှာ ရန်တွေဖြစ်ကြလေသတည်းပေါ့။ တခြား ဒါမျိုးကိစ္စတွေလည်း အများကြီး ရှိနိုင်တာပါပဲ။
၄။ ရည်းစားရှိတာ သိသိလျက်နဲ့ အောင်သွယ်လုပ်ပေးတာ။
ကိုယ့်မှာ ရည်းစားရှိမှန်းလည်း သိတယ်။ အဲဒီရည်းစားနဲ့လည်း သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးတယ်ပေါ့နော်.. တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ရည်းစားမပါဘဲ တခြားအုပ်စုတွေနဲ့ အပြင်သွားဖြစ်တဲ့အခါ အဲဒီအုပ်စုထဲက တစ်ယောက်နဲ့ အတင်းအောင်သွယ်လုပ်ပြီး စတာမျိုးပေါ့… ကိုယ့်ရည်းစားသိသွားတော့ ရန်ဖြစ်ရရောလေ.. အခန့်မသင့်ရင် နှစ်ယောက်ကြားက သံယောဇဉ်နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေတောင် ပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ လုံးဝ မလုပ်သင့်ပေမဲ့ ဒါမျိုးကိုမှ ဝါသနာကြီးစွာနဲ့ လုပ်တဲ့သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ ရှိတယ်နော်.. မယုံမရှိနဲ့…
ပြီးတော့ ထပ်ဖြစ်တတ်တာက ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ရည်းစားက ခဏတာ စိတ်ကောက် ရန်ဖြစ်ကြရင်း သူတို့ကို ရင်ဖွင့်မိတဲ့အခါမှာ “ဟဲ့.. အဲ့လောက်တောင် ဖြစ်နေတာ နင် ရွဲ့ပြီး ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ တွဲကြည့်ပါလား၊ ဒီတစ်ယောက်နဲ့ တွဲကြည့်ပါလား” စသဖြင့် အတင်းတွေ မြှောက်ပေးတတ်တာမျိုးပေါ့.. ကိုယ်သာ နားယောင်ကြည့်ပါလား.. သွားပြီပဲ..
အဲ့လိုတွေပေါ့နော်… ဒီလို ဝင်စွက်ဖက်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ရှိချင်ရှိမယ်၊ သူ့ဘက်မှာလည်း ရှိချင်ရှိမယ် ၊ နှစ်ဘက်စလုံးမှာလည်း ရှိချင်ရှိမယ်ပေါ့။ သူတို့ ဝင်စွက်ဖက်တာကို လက်ခံလား၊ လက်မခံဘူးလားဆိုတာက ကိုယ်က ဘယ်လောက် အကန့်ခွဲထားနိုင်လဲ၊ ပြတ်သားနိုင်လဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်သာပျော့ညံ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ တကယ်ချစ်ကြသူတွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မလိုအပ်ဘဲ စွက်ဖက်မှုတွေကြောင့် ပြတ်စဲသွားတာအထိဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်။
တကယ်တော့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဒီလို အနှောင့်တွေ ရှိသလို တကယ့်တကယ် စေတနာနဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးတတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်နော်… ယောင်းယောင်းတို့လည်း ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ကောင်းတဲ့ သူငယ်ဂျင်း မဟုတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းစစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့…
ဒီလို သူငယျခငျြးတှကွေောငျ့ ကိုယျ့အခဈြရေး အဆငျမပွေ ဖွဈနရေပွီလား
သူငယျခငျြးဆိုတာတော့ အရာရာ ဆိုးတိုငျပငျ၊ ကောငျးတိုငျပငျပေ့ါ။ ကိုယျ့မိဘ၊ ကိုယျ့ခဈြသူတှေ မသိတဲ့ ကိုယျ့အကွောငျးတှတေောငျ သူတို့က သိနတေတျတယျလေ။ အိမျ နဲ့ အဆငျမပွရေငျ ဒါမှမဟုတျ ခဈြသူ နဲ့ အဆငျမပွရေငျလညျး သူ့ကိုပဲ ရငျဖှငျ့ရတာမလား။
ဒါပမေဲ့ သူတို့ဟာ ကိုယျ့ရဲ့ ခဈြခွငျးမှာ ဝငျရောကျ စှကျဖကျဖို့ အခှငျ့အရေးမရှိတာတော့ အမှနျတရားပါ။ ဘယျလောကျပဲ ခငျခငျ ဘယျလောကျပဲ ကိုယျ့အပျေါ ကောငျးကောငျး သူငယျခငျြးတှကေ ကိုယျ့အခဈြရေးကို ဘေးကနေ အကွံဉာဏျပေးဖို့ အားပေးနှဈသိမျ့ဖို့ကလှဲရငျ စှကျဖကျခှငျ့တော့ မရှိဘူးပေါ့နျော။
ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့အခဈြရေးမှာ ဝငျစှကျတတျတဲ့ မိတျဆှဆေိုတာက ကိုယျ့ဘကျမှာရော၊ ကိုယျ့ခဈြသူဘကျမှာရော ရှိတတျ၊ ကွုံရတတျပါတယျ။ ဘယျလိုတှလေဲဆိုတော့ …
Related Article >>> ကိုယျ့ခဈြသူကို အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးက မုနျးတီးနရေငျ ဘာလုပျသငျ့လဲ?
၁။ ကိုယျတှကွေားကို အတငျးဝငျပါတာ
တဈခါတလေ သူငယျခငျြးဘေးမှာ ရှိတုနျး ခဈြသူနဲ့ (messenger မှာပဲဖွဈဖွဈ) စကားမြားနပွေီဆိုပါစို့။ သူငယျခငျြးက ဘေးကနေ ဟိုလိုပွောလိုကျလေ၊ ဒီလိုပွောလိုကျလေ နဲ့ အတငျးဝငျပါနတောမြိုးကလညျး ရှိတတျပါတယျ။ တဈခါတဈလေ ခဈြသူ နဲ့ ကိုယျကွားမှာ ဖွဈတဲ့ ပွဿနာက ဘာမှမဟုတျပမေဲ့ ကွားထဲက သူငယျခငျြးတှေ ဝငျပါလိုကျလို့ သေးသေးလေးကနေ အကွီးကွီးဖွဈသှားပါရောလား…
၂။ ကိုယျ့ခဈြသူ ရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို ဝဖေနျတာ
ကိုယျက ခဈြလို့ ရှေးခယျြထားပမေဲ့ ခဈြသူမှာလညျး အားနညျးခကျြဆိုတာရှိမှာပဲလေ။ ဒါကို သူငယျခငျြးက အမွဲလိုလို အပွဈတငျဝဖေနျနတေဲ့အခါ စိတျရှုပျရတာပေါ့နျော။ တကယျတော့ ကိုယျ့ခဈြသူကို ခွောကျပွဈကငျး သဲလဲစငျဖွဈစခေငျြတာတော့ လူတိုငျးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တကယျ့တကယျ ရှေးခယျြတဲ့အခါ ကိုယျနဲ့ အဆငျအပွဆေုံးသူကို ရှေးခယျြရတာ ပုံမှနျပဲလေ…
ဒါကိုမှ သူငယျခငျြးက နငျ့ခဈြသူက ပိနျလိုကျတာ၊ ဝလိုကျတာ၊ ရှညျလိုကျတာ၊ ပုလိုကျတာ ဆိုတာမြိုး၊ နငျ့ခဈြသူက အလုပျမရှိဘူးတို့ ပိုကျဆံကလညျး အမွဲပွတျနတောပဲတို့ ဒါမြိုးတှေ အဆတျမပွတျ ဝဖေနျလာတဲ့အခါ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈရပါတယျ။ သဈငုတျတှတေောငျ နှဲ့ပါမြားရငျ နဲ့လာသေးတာပဲ မဟုတျလား… ဒီလိုမြိုး ကိုယျကလညျး စိတျတှေ ယိုငျလာတဲ့အခါ အဆငျမပွမှေုတှေ ဖွဈလာပါတော့တယျ။ ဆိုလိုတာက ကိုယျ့ဘကျက ဘာမှမဟုတျဘူးလို့ ထငျထားတဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို သူငယျခငျြးကွောငျ့ ကိုယျ့စိတျထဲမှာ ကိစ်စအကွီးကွီးလို့ ထငျမွငျလာပွီး ကိုယျ့ခဈြသူကို စိတျပကျြလာမိတာမြိုးပေါ့။
၃။ ခဈြသူနဲ့ ကိုယျနဲ့ ကွားက ဆကျဆံရေးကို ဝဖေနျတာ
ခဈြသူတှကွေားမှာ ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ အလအေ့ကငျြ့လေးတှေ ရှိတတျကွပါတယျ။ ဥပမာ – အပွငျသှားမယျဆိုရငျ ခဈြသူကို အသိပေးပွီးမှ သှားတာမြိုး၊ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာ ပုံတှတေငျမယျဆိုရငျ ခဈြသူ ခှငျ့ပွုမှတငျတာမြိုး အစရှိသဖွငျ့ပေါ့လေ။ အပွငျလူတှအေတှကျ သညျးတယျ၊ ကဲတယျ ထငျစရာရှိပမေဲ့ ခဈြသူတှကွေားမှာတော့ ကွညျနူးစရာပေါ့။
ဒါတှကေို အပေါငျးအသငျးတှကေ ဝဖေနျလာတဲ့အခါ ခဈြသူတှကွေားက ကွညျနူးစရာလေး ပကျြစီးရတော့တာပါပဲ။ ဆိုပါစို့ ဘျောဒါတှေ နဲ့ အပွငျသှားရာကနေ Club သှားဖို့ဖွဈသှားတယျပေါ့။ အဲဒီမှာ ကိုယျက ငါ့ခဈြသူကို ခှငျ့တောငျးလိုကျဦးမယျ လို့ပွောတဲ့အခါ “အမလေး အဖွဈသညျးလိုကျတာ ပွောမနနေဲ့ နငျက သူ့ကိုအခုတညျးက ကွောကျနရေပွီလား” ဆိုပွီး ဇှတျအတငျးအသိပေးမခံဘဲ ထားတာမြိုးပေါ့။
ကိုယျ့ခဈြသူဘကျက ကွညျ့တော့လညျး အရငျက ဒါမြိုးဆို သူ့ကို အသိပေးနကေမြှာ အခုလို မပွောမဆိုဘဲသှားတာ သိလိုကျရရငျ အံ့သွဒေါသထှကျမှာပဲ။ အဲဒီမှာ ရနျတှဖွေဈကွလသေတညျးပေါ့။ တခွား ဒါမြိုးကိစ်စတှလေညျး အမြားကွီး ရှိနိုငျတာပါပဲ။
၄။ ရညျးစားရှိတာ သိသိလကျြနဲ့ အောငျသှယျလုပျပေးတာ။
ကိုယျ့မှာ ရညျးစားရှိမှနျးလညျး သိတယျ။ အဲဒီရညျးစားနဲ့လညျး သူတို့နဲ့ ရငျးနှီးတယျပေါ့နျော.. တဈခါတလေ ကိုယျ့ရညျးစားမပါဘဲ တခွားအုပျစုတှနေဲ့ အပွငျသှားဖွဈတဲ့အခါ အဲဒီအုပျစုထဲက တဈယောကျနဲ့ အတငျးအောငျသှယျလုပျပွီး စတာမြိုးပေါ့… ကိုယျ့ရညျးစားသိသှားတော့ ရနျဖွဈရရောလေ.. အခနျ့မသငျ့ရငျ နှဈယောကျကွားက သံယောဇဉျနဲ့ ယုံကွညျမှုတှတေောငျ ပကျြစီးသှားတတျပါတယျ။ လုံးဝ မလုပျသငျ့ပမေဲ့ ဒါမြိုးကိုမှ ဝါသနာကွီးစှာနဲ့ လုပျတဲ့သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးတှေ ရှိတယျနျော.. မယုံမရှိနဲ့…
ပွီးတော့ ထပျဖွဈတတျတာက ကိုယျနဲ့ ကိုယျ့ရညျးစားက ခဏတာ စိတျကောကျ ရနျဖွဈကွရငျး သူတို့ကို ရငျဖှငျ့မိတဲ့အခါမှာ “ဟဲ့.. အဲ့လောကျတောငျ ဖွဈနတော နငျ ရှဲ့ပွီး ဟိုတဈယောကျနဲ့ တှဲကွညျ့ပါလား၊ ဒီတဈယောကျနဲ့ တှဲကွညျ့ပါလား” စသဖွငျ့ အတငျးတှေ မွှောကျပေးတတျတာမြိုးပေါ့.. ကိုယျသာ နားယောငျကွညျ့ပါလား.. သှားပွီပဲ..
အဲ့လိုတှပေေါ့နျော… ဒီလို ဝငျစှကျဖကျတတျတဲ့ သူငယျခငျြးဆိုတာ ကိုယျ့ဘကျကလညျး ရှိခငျြရှိမယျ၊ သူ့ဘကျမှာလညျး ရှိခငျြရှိမယျ ၊ နှဈဘကျစလုံးမှာလညျး ရှိခငျြရှိမယျပေါ့။ သူတို့ ဝငျစှကျဖကျတာကို လကျခံလား၊ လကျမခံဘူးလားဆိုတာက ကိုယျက ဘယျလောကျ အကနျ့ခှဲထားနိုငျလဲ၊ ပွတျသားနိုငျလဲ ဆိုတဲ့ အပျေါမှာပဲ မူတညျပါတယျ။ ကိုယျသာပြော့ညံ့နမေယျဆိုရငျတော့ တကယျခဈြကွသူတှေ သူငယျခငျြးတှရေဲ့ မလိုအပျဘဲ စှကျဖကျမှုတှကွေောငျ့ ပွတျစဲသှားတာအထိဖွဈလာနိုငျတာပေါ့နျော။
တကယျတော့ သူငယျခငျြးတှထေဲမှာ ဒီလို အနှောငျ့တှေ ရှိသလို တကယျ့တကယျ စတေနာနဲ့ အကွံဉာဏျကောငျးပေးတတျတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါတယျနျော… ယောငျးယောငျးတို့လညျး ကိုယျ့အပျေါ တကယျကောငျးတဲ့ သူငယျဂငျြး မဟုတျတဲ့ သူငယျခငျြးစဈတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့…
Tags: Couple, friends, Friendship, love, Relationship, tips